ဆိုဖီယာနှင့် Leonor ဃ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် ၏ "ဆိုဖီယာနှင့် Leonor
မိမိအမြေးများအကြားခြားနားချက်များကိုလုပ်မထားပါနဲ့။ ချမှတ်ခဲ့သောစည်းမျဉ်း စပိန်ဘုရင်မဆိုဖီယာ။ ဒါကြောင့်လာသောအခါသူမ၏မြေး Leonor နှင့်ဆိုဖီယာ, မိန်းကလေးများ Letizia သူမ၏သူတို့နှင့်အတူလာရန်နှင့်၎င်းတို့၏မိခင်ဘုရင်မကြီးဆိုဖီချီတုံချတုံနဲ့အပျော်အပါးနှင့်အတူရှိသွားလေ၏ဘူးချင်တယ်။ ဘုရင်မကြီးဆိုဖီပြီးသားအသက်ရှင်သောဗားရှင်းကိုကြည့်ဖို့ရုပ်ရှင်ရုံမှထွက်သွားသေးရက်အနည်းငယ်အစောပိုင်းကကဗစ်တိုးရီးယားက de Marichalar, အ Infanta အယ်လီနာနှင့်အိုင်ရင်း Urdangarin ၏သမီးနှင့်အတူ Infanta ခရစ်စတီးနား၏သမီးဖြစ်ပါသည် နာမည်ကျော်ကာတွန်း အဆိုပါခြင်္သေ့ဘုရင်, မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဖော်ပြသ kiosk အတွက်ရှုထောင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သြဂုတ်လ 14.
ဆိုဖီယာအကြား LeonorLetizia နှင့်ဘုရင်မဆိုဖီယာကိုကြီးစွာသောကြံရှိသေး၏။ ယခုပင်လျှင် 2018 ခဲ့, မျိုးဆက်သုံးဆက် အတူတူအချိန် shared ခဲ့သည်။ မော်စကိုဘဲလေးနှင့်စျေးကွက် Pollensa အားဖြင့် Swan Lake ၏ကိုယ်စားပြုမှုအကြားယခုနှစ်နွေရာသီတွင်, သူတို့ ဘဝကသူတို့ကိုကမ်းလှမ်းသောသူအပေါင်းတို့သည်လေးခံစားအချိန်လေး။ ပေါ့ပေါ့ wear ခုနှစ်, Letizia သမီးဓာတ်ပုံဆရာများအတွက်ရှိုးဖို့အချိန်ယူပါ။ "ဒါဟာဘုရင်မကြီးဆိုဖီမသိခဲ့ပါတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရွာသည်နှင့်အဘယ်သူသည်လည်းခံစားခဲ့ရ"မိဖုရား၏သမီးနှောင်းပိုင်းတွင်နေ့လည်ခင်းပြောပြအပြင်။
ဒါဟာစပိန်၏တော်ဝင်မိသားစုကသူ၏နေအိမ်သို့မှာသူမ၏အားလပ်ရက်ခံစားသော Palma de Mallorca Sun ကအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးများ Letizia, 12 နှင့် 14 နှစ်ပေါင်းအသက်နေသော်လည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့အကျပ်အတည်းတို့ထိရှိသည်ဟုမထင်ထားဘူး။ ဆိုဖီယာနှင့် Leonor ဘုရင်မကြီး Sophia ၏မွေ့လျော်ဖို့, ၎င်းတို့၏မိဘများနှင့်၎င်းတို့၏အဖွားရန်အလွန်နီးကပ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
စပိန်ဘုရင်မဆိုဖီယာနှင့်မင်းသမီး Leonor နှင့်ဆိုဖီယာဟာ cath အတွက်အီစတာ Mass တက်ရောက်ခဲ့သည်
လူမှုရေးလောကဝတ် & # 039 အပေါ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်ဘို့ညစာစားပွဲတက်ရောက်ခြင်းကနေတားမြစ်ပိတ်ပင် Meghan ဟယ်ရီ; - ပြောဆိုချက်ကို
RDC : Revue de la presse kinoise de ce mercredi 21 Août – Afrique
DJ အာရာဖတ်အသုဘ: အံမရှိခြင်း, ထိုစည်းရုံးရေးကော်မတီများ၏အကြီးမားဆုံးမသန်မစွမ်း
ဆင်: Seydou Doumbia, ဘိုနီ Wilfried ... ဘယ်အရာကိုမျှတတ်!
Lionel Messi, ထိပ်ဥရောပလိခ်5အတွက်အကောင်းဆုံး dribbler !! ပိုများသော || Lionel Messi အကောင်းဆုံး Dribbler - ဗွီဒီယို
အာဖရိကမှာရုရှားသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ဘုတ်အဖွဲ့ - JeuneAfrique.com
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်3,140
TECH & Telecom1,556